Ny Cabo Verde Airlines sy Africa World Airlines dia manatsara ny fifandraisana amin'ny rivotra any Andrefana Andrefana
Home » Fandefasana gazety » Ny Cabo Verde Airlines sy Africa World Airlines dia manatsara ny fifandraisana amin'ny rivotra any Andrefana Andrefana
Ny seranam-piaramanidina Cape Verdean Cabo Verde Airlines (CVA) sy Africa World Airlines (AWA) dia nanambara ny fiaraha-miasa hanatsarana ny fifandraisana any Afrika Andrefana amin'i Eropa, Amerika Avaratra ary Amerika atsimo.
Manomboka amin'ny 1 Febroary, CVA sy AWA dia hanomboka asa fivarotana mitambatra ho an'ny zotram-piaramanidina roa.
Cabo Verde Airlines dia mpandeha fiaramanidina voalamina manidina tsy miato avy amin'ny ivon-toerany iraisam-pirenena ao amin'ny nosy Sal, izay mampitohy kontinanta efatra.
Amin'ity fiaraha-miasa ity dia afaka mifandray amin'ny alàlan'ny foiben'ny CVA ao Sal ny mpandeha AWA miaraka amin'ireo zotram-piaramanidina hafa, toa an'i Dakar (Senegal) sy ny nosy Cape Verdean any Santiago, São Filipe ary São Vicente.
Ny CVA koa dia miantoka ny sidina mahazatra mankany Lisbon, Paris, Milan ary Roma (Europe), Boston sy Washington, DC (USA), ary hatrany amin'ireo tanànan'ny Breziliana Fortaleza, Porto Alegre, Recife, ary Salvador.
Ho fanampin'ny fifandraisana hub, ny programa Stabover an'ny Cabo Verde Airlines dia mamela ny mpandeha hijanona mandritra ny 7 andro ao Cabo Verde ary hikaroka ireo traikefa samihafa any amin'ny nosikely tsy misy sarany fanampiny amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina.
Africa World Airlines dia miasa amin'ny tanàna dimy any Ghana: Accra, Kumasi, Tamale, Takoradi ary Wa. AWA koa dia manompo an'i Lagos - teboka misy ifandraisany amin'ny CVA - sy Abuja any Nizeria, Monrovia any Liberia, ary koa Freetown any Sierra Leone ary Abidjan any Ivory Coast.
Ity fiaraha-miasa ity dia ahafahan'ny mpandeha avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mandeha eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina miaraka amin'ny tapakila tokana, mijery indray mandeha monja, ary mamela ny entana hitondra any amin'ny toerana farany.
Jens Bjarnason, CEO ary filohan'ny Seranam-piaramanidina Cabo Verde, dia nilaza hoe: “Faly be izahay amin'ity fiaraha-miasa amin'ny Africa World Airlines ity, izay azo antoka fa hitondra fifandraisana bebe kokoa amin'ny firenena Afrikana Andrefana. Tena zava-dehibe amin'ny CVA ny famoronana fiaraha-miasa stratejika hanitatra ny faritry ny CVA any Afrika Andrefana, tsena mitombo izay tena manandanja tokoa ho anay ”.
Michael Cheng Luo, CEO an'ny Africa World Airlines, hoy izy: "Faly ny AWA ampiana ny Cabo Verde Airlines ho mpiara-miasa akaiky indrindra amintsika, hampifandray ny mpandeha manerana ny tsenanay any Afrika Andrefana".
Ny fiaraha-miasan'ny CVA sy ny AWA dia hanan-kery amin'ny 1 Febroary ary afaka mividy tapakila amin'ny alàlan'ny fantsona fividianana ny mpandeha.
Manantena i Greece fa hampiato ny fanafihan'ny mpifindra monina ny 'sakana mitsingevana'
Ny valanaretina Coronavirus dia miteraka fianjerana amin'ny dian'ny sinoa